DEG DEG, Dawladda Maraykanka oo si adag uga hadashay xiisadaha ka taagan Muqdisho (AQRISO). – Soomaali 24 Media Network
DEG DEG, Dawladda Maraykanka oo si adag uga hadashay xiisadaha ka taagan Muqdisho (AQRISO).
Posted on April 27, 2021 Leave a Comment on DEG DEG, Dawladda Maraykanka oo si adag uga hadashay xiisadaha ka taagan Muqdisho (AQRISO).
Dowladda Maraykanka ayaa ka hadashay rabshadaha iyo xiisadaha ka taagan magaalada Muqdisho kuwaa oo ka dhashay muddo kordhin dhawaan uu sameeyay aqalka golaha shacabka ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Dawladda Maraykanka ayaa ku hanjabtay inay diyaarinayso Cunaqabateyn iyo xaddidaada VISA-ha ama dal ku galka si loogu soo rogo shaqsiyaadka hormuudka u ah dhibaatooyinka ka jira Muqdisho.
” Mareykanku wuxuu si aad ah uga walaacsan yahay isku dhacyadii rabshadaha watay ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan dhinacyada inay is xakameeyaan oo ay si nabbad ah ku xalliyaan khilaafaadkooda”. ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Maraykanka.
” Wadahadal iyo is afgarad ayaa ah dariiqooyinka kaliya ee lagu xallin karo jahwareerka doorashada, waxaana ku boorineynaa dhinacyada inay dib u bilaabaan wadaxaajoodka hal mar si loo gaaro wadadii lagu heshiiyey ee horey loogu mari lahaa doorashooyinka deg degga ah”. ayaa lagu yiri mar kale qoraalka.
” Sida uu xoghayaha horey u sheegay, Mareykanku wuxuu diyaar u yahay inuu tixgaliyo dhammaan aaladaha la heli karo, oo ay ku jiraan cunaqabateynta iyo xaddidaadda fiisaha, si looga jawaabo dadaallada lagu wiiqayo nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya”. ayaa sidoo kale lagu sheegay qoraalka ka soo baxay dawladda Maraykanka.
Hadalka dawladda Maraykanka ayaa imaanaya ayadoo xiisado dagaal iyo guluf colaadeed uu ka jiro magaalada Muqdisho.
← DEG DEG, Ciidamada Dawladda Federalka oo gudaha u galay idaacadda Mustaqbal (AQRISO)
XOG, Qodobbo xasaasi ah oo looga wada hadlay Kulan dhexmaray midawga musharaxiinta iyo Beesha caalamka (AQRISO). →